ကပျပါပေ့ ပီကရေယျ: Template Changed !!!
Template Changed !!!
ဆောင်းဦး ဝင်တယ်ဆိုရင်ပဲ မိုးရာသီက တိုက်စား ခံလိုက်ရတဲ့ ဆေးရောင်တွေကို သစ်လွင်လာအောင် အိမ်တွေ တိုက်တွေ ဆေးအသစ် ပြန်သုတ်ကြတယ်။ အခု ဆောင်းဝင်ပြီ ဆိုတော့ ကျနော်ရဲ့ အိမ်လေးကိုလည်း ပြန်ရွှိုင်းချင်စိတ် ပေါက်လာပါတယ်။ နောက်ပြီး အခုတလော ကိုးနတ်ရှင်ရဲ့ နှိပ်စက်မှုကြောင့် ကျနော်ရဲ့ ဘလော့ဂ်လေးဟာ အတက်နှေးနေပါတယ်။ ကျနော် လျှောက်ကလိထားတဲ့ Widget တွေကလည်း မနည်းတော့ ကော်နက်ရှင် ကောင်းရင်တောင် နည်းနည်း ကြာပါတယ်။ အခုတော့ ပိုဆိုးပြီပေါ့။ နယ်က သယ်ရင်းတွေက တင်မရဘူးချည်း လှမ်းလှမ်း အော်ဆဲနေကြတယ်လေ။
ကျနော်ရဲ့ အရင် တန်းပလိတ်လေးကို တင်ခါစက အတော်လေး ရိုးရှင်းတယ်လို့ ထင်ထားပေမယ့် မြင်ပါများလို့လား မသိ။ ကြည့်ရင်းနဲ့ ရှုပ်ရှုပ်လာတယ်။ Sidebar မှာ ထည့်ထားတဲ့ Widget တွေကလည်း မနည်းတော့ မျက်စိထဲ ရှုပ်နေတယ်။ နောက်ပြီး ပို့စ်နေရာက ဖတ်ရတာ ကျဉ်းသလားလို့ ခံစားလာရတာနဲ့ တန်းပလိတ်ပြောင်းမယ် ဆိုပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လကတည်းက တန်းပလိတ်အသစ်အတွက် ကြိုတင် စိတ်ကူးခဲ့တော့တယ်။ တန်းပလိတ်အသစ်မှာ ဘယ်လို အင်္ဂါရပ်တွေ လိုချင်သလဲဆိုရင် (၁) ရိုးရှင်းရမယ်။ (၂) ပို့စ်နေရာ ကျယ်ရမယ်။ (၃) Widget များများ ထည့်နိုင်ရမယ်။ (၄) တန်းပလိတ်က ကြည့်လိုက်ရင် မျက်စိ အေးရမယ်။
ဘလော့ တန်းပလိတ်ကို ပြင်ဖူးတဲ့ သူတိုင်း သိပါလိမ့်မယ်။ Sidebar မှာ widget များများ ထားရင် sidbar က ရှည်လာမယ်။ Sidebar ရှည်တော့ တစ်ခုတစ်ခု ရှာဖို့ဆို အောက်အထိ ဆင်းနေရတာလည်း တစ်ဒုက္ခ။ ဘလော့တွေ သွားလည်ရင် CBox လိုက်ရှာရတာလည်း အမော။ နောက်ပြီး Content Wrapper (Post နေရာ) နဲ့ Sidebar Wrapper နဲ့ အတိုအရှည် မညီရင်လည်း ကြည့်မကောင်းဘူး။ widget များလွန်းရင် Sidebar ရှည်တော့ ကြည့်လို့မကောင်းဘူး။ အဆင်မပြေဘူး။ Sidebar နှစ်ခု ထားပြန်တော့ Post နေရာ ကျဉ်းသွားမယ်။ နောက်ပြီး ကြည့်ရတာ မရှင်းတော့ဘူး။ ဒီတော့ အားလုံး အဆင်ပြေအောင် လုပ်နိုင်တာက Widget တွေ အားလုံးကို လိုချင်မှ ခေါ်ထုတ်လို့ရရင် ကောင်းမယ်လို့ စိတ်ကူးမိတယ်။
CBox ကို မမြင်ချင် ဖျောက်ထားလို့ ရရမယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားရင်းနဲ့ Peekaboo ရဲ့ ပို့စ်ခေါက်တဲ့ idea ကို သတိထားမိသွားတယ်။ ပို့စ်ခေါက်သလို Peekaboo ရဲ့ widget ခေါက်တဲ့နည်းတွေကို ရှာတွေ့သွားတယ်။ CSS မှာ display:none; နဲ့ display:inline; ဆိုတဲ့ code တွေကို သေချာ လေ့လာပြီး ပုံစံ ပြောင်းကြည့်လိုက်တော့ အခု ညာဘက်မှာ မြင်နေရတဲ့ ပုံစံ ထွက်လာပါတယ်။ ညာဘက် Menu ကနေ ကြိုက်ရာ နှိပ်လိုက်ရင် သက်ဆိုင်တဲ့ Widget ပေါ်လာမယ်။ နောက်ပြီး Widget တစ်ခုကို မရွေ့ဘဲ တစ်နေရာတည်းမှာပဲ ပုံသေ မြင်နေချင်တယ်။ အခု CBox ဟာဆိုရင် Scroll Bar နဲ့ အောက်ကို ဘယ်လောက် ဆင်းဆင်း အမြဲ မြင်နေရတယ်။ X Y Coordinate တစ်သက်မတ်တည်း ထားချင်တာပေါ့။ အဲဒီလို Scroll Bar နဲ့ ဘယ်လောက်ဆင်းဆင်း တစ်နေရာတည်းမှာပဲ အမြဲ ရပ်နေစေချင်ရင်တော့ position:fixed; ဆိုတဲ့ CSS code ကို သုံးရပါ့မယ်။
ကျနော် တန်းပလိတ် တစ်ခု ပြောင်းတိုင်းပြောင်းတိုင်းမှာ ကလိလို့ရတဲ့ အသစ်အဆန်းတွေ ထည့်ထားတတ်ပါတယ်။ ဒါကို မြင်တတ်တဲ့ ဘလော့ဂါတချို့က စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ဘယ်လို လုပ်ရသလဲ မေးလာတတ်ကြတယ်။ သူတို့လို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ လေ့လာချင်ရင် လေ့လာလို့ရအောင် ကျနော် နည်းနည်း ပြောပြနေတာပါ။ နောက်ပြီး လက်ရှိ တန်းပလိတ်ရဲ့ XML file ကိုလည်း လေ့လာနိုင်အောင် ထည့်ပေးလိုက်ပါ့မယ်။ ကျနော် နေ့ပေါင်းများစွာ တပင်တပန်း ရှာထားတာတွေကို သိပြီး ဒီလိုလုပ်လို့ ရပါလား ဆိုတဲ့ အာသီတတွေကို နှိုးဆွချင်တာလည်း ပါပါတယ်။ Idea အသစ်အဆန်းနဲ့ လုပ်ချင်တာလေးတွေ ရှိရင်လည်း ကျနော့်ကို ပြောပါ။ ကျနော်လည်း ကူ စဉ်းစားပေးပါ့မယ်။ နောက် တစ်ရက်ရက်မှာ ဘလော့ဂ်တစ်ခုအတွင်း အရောင်းရောစပ်ပုံကို ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ ဘယ်လို အရောင်တွေ ရောထားရင် ပိုပြီး အသက်ဝင်သွားသလဲ ဆိုတာ ပို့စ်အနေနဲ့ ရေးဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။
ဒီ တန်းပလိတ်ရဲ့ XML file ကို ဒီမှာ Download ယူပါ။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
Sunday, November 16, 2008 | စာညှနျး Announcement
ဤပို့စ်အား Sunday, November 16, 2008 နေ့တွင် ရေးသားထားပြီး Announcement နာမည်ဖြင့် အညွှန်း သက်မှတ်ထားပါသည်။ ကွန်းမန့်များအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိလိုလျှင် RSS 2.0 ဖြင့် တောင်းဆို၍ ရယူနိုင်သည်။ လာရင်းနေရာ သို့ ပြန်လည် သွားရောက်နိုင်ပါသည်။